स्मार्टफोनको बढी प्रयोग घातक, बच्चाको मानसिक विकासमा पनि समस्या ! – Etajakhabar
स्मार्टफोनको बढी प्रयोग घातक, बच्चाको मानसिक विकासमा पनि समस्या !
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै स्मार्टफोन जीवनशैलीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । तर, यसको प्रयोगमा भने सावधानी अपनाउनु जरुरी छ।
जर्जिया विश्वविद्यालयले गरेको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि कम्प्युटर गेम खेल्ने, सोसल मिडियामा बढी बस्ने र स्मार्टफोनको बढी प्रयोग गर्ने टिनउजर्सभन्दा स्मार्टफोन कम चलाउनेहरु खसी हुन्छन् । स्मार्टफोनको अत्याधिक प्रयोगले दिमागमा असर पुग्नुका साथै निराशा, बेचैन र अनिद्राजस्ता समस्या बढेर जान्छ ।
कमजोर बनाउँछ दिमाग विशेषज्ञले भनेका छन् कि बालबालिकालाई स्मार्टफोन दिनु भनेको उनलाई एक ग्राम कोकिन पनि सँगै दिनु जस्तै हो । बच्चा जब स्मार्टफोनको सम्पर्कमा आउँछ त्यसपछि उसको सही ढंगले मानसिक विकास हुन पाउँदैन । स्मार्टफोनको कारण बच्चाको मस्तिष्क कमजोर बन्छ । स्मार्टफोनबाट निस्कने रेडियो तरंगले दिमागमा मात्र गहिरो प्रभाव पार्दैन कि सुन्ने क्षमतामा समेत ह्रास आउँछ ।
यस्तो असर -स्मार्टफोनको असरले आँखामा असर पुग्छ। यसको कारणले आँखाको दृष्टिसमेत कमजोर हुनसक्छ । यस्तो लत लागेका मानिस क्रोनिक ड्राई आई सिन्ड्रोमबाट पीडित हुनसक्छ । -स्मार्टफोनको बढी प्रयोग गर्ने बच्चाले आउटडोर गेम खेल्न मन गर्दैनन् । जसले गर्दा उसको शारीकि विकासमा असर पुग्छ । परिणाम मोटोपनजस्ता समस्या देखिन थाल्दछ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ । -रातमा सुत्नुभन्दा पहिले बिहान उठ्ने समय स्मार्टफोन लामो समयसम्म चलाउनु पनि एक रोग हो । जसलाई स्मार्टफोन ब्लाइन्डनेस भनिन्छ । -फोनलाई लामो समय मुटुको नजिक राख्नु हुँदैन । गोजीमा लामो समय राखेर सुत्नु हुँदैन । यसले अनिद्राको समस्या निम्त्याउन सक्छ।
-गर्दन बढी झुकाएर माबाइल चलाउँदा गर्दनको हाडसम्बन्धी विभिन्न रोग देखा पर्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १८, २०७४ समय: १०:५१:२८